Saddexda Xisbi Siyaasi sidee ayay u arkaan Heshiiska Komishanku la galay Shirkadda Ingiriiska ah? | Somaliland.Org
November 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Saddexda Xisbi siyaasadeed ee Somaliland, ayaa ka hadlay mawqifkooda la xidhiidha Shirkad Ingiriis ah oo Komishanka Doorashooyinku sheegeen inay heshiis kula galeen kala-hufida Diiwaangelinta Codbixiyeyaasha.
Komishanka Doorashooyinka oo shalay shirjaraa’id ku qabtay Hargeysa, waxay sheegeen inay Shirkad fadhigeedu Ingiriiska yahay oo lagu magacaabo Electoral Reform International Services (ERIS) ay heshiis kula galeen kala-shaandhaynta Diiwaangelinta oo ay gacanta ku haysay hay’adda Interpeace, ka hor intii aan dalka laga saarin. “Kollay, cidda la siinayay waxay ka dhexaysay Komishanka iyo Deeqbixiyeyaasha, berrina (maanta) waanu la balansanahay oo way noo yeedheen qolada Komishanku oo haddii Alle ka dhigo waanu arki doonaa. Markaa kollay iyaguun baa warar dheeraad ah iyo wixii tafaasiil ah ee aanu u baahanahay inaanu ogaano na siin doona,” sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay arrintaas. Wuxuuna intaa raaciyay; “Kollay in cid la siin doono waanu ogayn, ciddaana qolada Ingiriisku qolyihii hawsha sida aadka ah inoogula jiray ee heshiiska inala waday buu hormood ka ahaa. Kollay in cid ah dhex ah la keenayo ayuun baanu ogayn, ciddaa imika la magacaabayna wax aanu ku caalaqno, ku diidno oo aanu ku saluugno ma hayno.”
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE waxa uu ka gaabsaday inuu ka sii hadlo arrintaas, taas bedelkeedana waxa uu xilliga ay ka hadli karaan u riixay ka dib kulanka ay Isniinta maanta Komishanka kala yeelanayaan faahfaahin la xidhiidha Shirkadda iyo heshiiska ay la galeen. “Wixii ay war dheeraad ah naga siiyaan baanu ogaanaynaa, markaas baananu wixii jawaab ah ee aanu u baahanay ka bixinaynaa,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Mar la waydiiyay sida uu u arko in meesha laga saaray doorkii hay’adda Interpeace ee kala-hufida Diiwaangelinta oo ay hore gacanta ugu haysay, waxa uu tilmaamay in arrintaasi tahay mid ay isfaham ka gaadheen dhinacyada ay khusaysaa. “Jerry (Jerry McCain – Agaasime gobolleedka Interpeace) waa kii maalintii dhawayd yimi (Hargeysa) ee waramay, markaa waxaan filayaa qolooyinka bixinaya iyo Interpeace ma kala xog la’a, waxaanan u malaynayaa in qoloba shaqada dhinacooda uun kaga jiraan, arrintaa warkeeda rasmiga ahna berri (maanta) ayaanu ogaan doonaa,” ayuu yidhi Guddoomiyuhu. “Taasi heshiiskii ayay ka mid ahayd oo wax cusub maaha oo waxay ahayd inay ka soo horeeyaan qolada khubarada ah ee Farsamadu,” ayuu yidhi Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo la waydiiyay sida uu u arko hadal Komishanku ku sheegay in aanay waqtiga doorashada Madaxtooyada cayimaynin ilaa Khubarada Server-ku hawshaa galaan.
Kusimaha Guddoomiyaha, ahna Guddoomiye kuxigeenka xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Aadan Maxamed Mire (Waqaf), ayaa sheegay in aanay xisbi ahaan waxba ka qabin heshiiskaa dhexmaray Komishanka iyo Shirkadda ERIS. “Annagu waxaanu u aragnaa in Komishanku u madaxbanaan yahay ciddii uu u arkayo inay hawshan u qalanto inuu qandaraas la geli karo, waxaananu u arkaynaa inay arrintaa guul ka gaadheen,” ayuu yidhi Guddoomiye kuxigeenka UCID oo xalay Wargeyska Ogaal wax ka waydiiyay mawqifkooda la xidhiidha heshiiskaas. “Annagu xisbi ahaan wax aanu ka qabnaa ma jirto ciddii wax inoo hagaajinaysa – hadday kuwii hore yihiin iyo hadday kuwo dambe yihiinba, waana mid aanu raali ka nahay go’aanka ay qaataan Komishanku,” ayuu raaciyay.
Waxa uu sheegay in Komishanku maanta kulan ugu yeedheen Xisbiyada, si ay xogwaran uga siiyaan heshiiskaas. “Haddaanu Axsaabta nahay, Komishanku waxay yidhaahdeen berri (maanta) ayaanu warbixin idin siinaynaa. Sidaa darteed, ka hordhici maayee markay warbixinta na siiyaan baan arrintaa ka jawaabi karaa,” ayuu yidhi Gudoomiye Kuxigeenka oo la waydiiyay inay wax xog ah ka hayaan taariikhda Shirkadda Ingiriiska ah ee Komishanku heshiiska la galay. “Markii horeba heshiiska way ku jirtay in marka qolada Server-ka ka shaqaynaysaa timaado ee waqtiga uu ku dhamaanayo la ogaado, in Komishankuna markaa hawshoodaa galaan,” ayuu yidhi Aadan Mire Waqaf oo sidoo kale la waydiiyay sida uu u arko hadal Komishanku ku sheegay in aanay doorashada cayimaynin ilaa khubarada Farsamadu hawsha kala-shaandhaynta Diiwaangelinta dhamaynayaan. “Waa laba arrimood oo isku xidhan, qoladaa Khubarada ah ee imanaya ayayna ku xidhan waqtiga iyo muddayntuba, waxayna ku go’aan qaadan karaan (Komishanku) marka la ogaado inta hawsha Serer-ku ku dhammaanayso, hawshana si is barbar socota ayaa lagu wadi karaa. Markaa waa arrin ay ila tahay in loo daayo Komishanka,” ayuu raaciyay.
Mar la waydiiyay sida uu u arko in meesha laga saaray doorkii Interpeace ku lahayd Diiwaangelinta oo ay hore gacanta ugu haysay, waxa uu ku jawaabay; “Anigu ma qabo in Interpeace laga saaray hawshii dhinaca farsamada ee ay Komishanka kala shaqaynaysay, qoladan Ingiriiska ahna waxa loo igmaday waa Server-ka uun oo ay shaqadeedu ku egtahay. Laakiin, in Interpeace soo noqonayso oo ay Komishanka dhinaca farsamada kala shaqaynayso waa mid laysla wada qaatay,” ayuu yidhi Kusimaha Guddoomiyaha xisbiga UCID.
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud ee xisbiga talada dalka haya ee UDUB Jaamac Yaasiin Faarax oo xalay aanu dhinacooda wax ka waydiiyay heshiiska Komishanka iyo Shirkadda ERIS, waxa uu sheegay inay xisbi ahaan soo dhawaynayaan heshiiskaas. “Waxaanu u aragnaa in Guddiga Doorashooyinka Qaranku ay ku dhiiradeen inay gudogalaan hawshii loo igmaday oo aanu waqti dambe ha halaabin,” ayuu yidhi Xoghayuhu. Wuxuuna amaanay Shirkadda ERIS oo uu sheegay inay tahay mid khibrad dheer u leh hawlaha Doorashooyinka, meelo badan oo dunida ahna la soo shaqaysay. “Ka Xisbi ahaan, arrintaa waanu ku qanacsanahay, waananu ku taageersanahay hay’adda dawliga ah ee qaran ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka,” ayuu raaciyay.
Waxa uu sheegay in hay’adda Interpeace hadda loo ogolaaday inay Komishanka ka kaalmayso door hooseeya, kuna kooban farsamada oo keliya oo ay dusha ka hagayaan Guddiga Doorashadu.
Jaamac Yaasiin Faarax waxa uu dhaliilay doorkii hore ee ay Interpeace ku lahayd Komishanka Doorashooyinka. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in haatan badi hawshaa ay qaban doonto Shirkadda Komishanku heshiiska la galeen, taasoo uu tilmaamay in si feejigan loola socon doono.